Small Business Awards	Small Business Development Center
Xarunta Horumarinta Small Business The waaqiciga og yahay in ganacsatada yar yar ay yihiin lafdhabarta ganacsi xor ah American. Maalin walba, ay ka shaqaynayaan in ay koraan dhaqaalaha maxalliga ah, abuuro shaqooyin qarniga 21aad, abuurnimo drive, iyo in la kordhiyo tartan caalami ah America ee.
Magacaabidda furan yihiin, waayo, 2019 abaalmarino.
DAMBAYSA 5:00 pm Jimce, December 7, 2018.
Download foomamka magacaabista iyo tilmaamaha
qaata Award waa la murwayn doonaa xaflad gaar ah
Tuesday, Laga yaabaa 7, 2019 inta lagu guda jiro SBA Week National Ganacsiga Yaryar.
Qoyska leedahay Ganacsiga Yaryar
Laga tirada badan yahay ee ganacsiga yaryar
Halyeeyga leedahay Ganacsiga Yaryar
Haweenay leedahay ganacsiga yaryar
Buuxin Honorees ee sannadkii hore:
Qandaraaslaha weli (Age 50+)
Farsamada Celinta LLC, Kasota
Mark & Sandra Johnson hamiday Mark Johnson ee dhismayaasha qadiimka ah dib u dhaco si 1976 marka beeralay ah isaga siiyey sherkadaha duug ah. alwaax in dib waa qayb ka mid ah guriga uu weli ku nool yahay maanta. Mark bilaabay farsamada Celinta da 60, isticmaalka labaatan sano oo waayo aragnimo ah oo uu qandaraasle guud si aad u ogaato iyo dhaqan-khasnadihii jir ah u farxi macaamiisha iyo looga hortago qaab-dhismeedka jirka ka noqday noocyada khatar ku. Isaga oo mashaariic qol log iyo barn gaar ah had iyo jeer waa mid ka mid-ah-a-nooc, iyo farsamada tayada isaga ka dhigaa inuu ka doondooneen ka dib dhise guud ahaan Galbeedka ah. Mark adeegta on board of Friends of Barns Minnesota oo inta badan caawiyaa leh isaga oo kaniisad iyo bulshooyinka taariikhiga ah. Waxa intaa dheer in abaalmarintan gobolka, SBA doortay farsamada Celinta sida Minnesota ee Kaganacsiga Encore Sanadka.
Blane, Lori & Mark Maher Blue Earth Monument, Inc. waa ganacsi degaanka laga leeyahay qoyska abuuraya amaanta jecel tan 1877. All of taxadiri waxaa lagu abuuray ee-guriga by fannaaniinta xirfad iyo saanacyadii, bixiya muuqaalo caadadii, farshaxanka caadadii, qaabeeyaan naqshado xardhan iyo ka badan. Lori iyo Mark Maher wuxuu noqday milkiilayaasha in 2008, Milkiilayaasha ka dibna kaliya ee 2011 marka Lori aabihiis ka fariistay ka dib markii 52 sano. In 2015, ay ballaariyeen la meel cusub ee Albert Lea, maamula ay ina Blane. Shirkadda ayaa lagu yaqaanaa in ay aqoon iyo wanaagga ee daryeelka qoysaska ee jeer ugu adag.
Kato daldalidda LLC, Mankato
Obeyd qaawan & Ayan Musse Kato daldalidda waa qoyska iska leh oo ku shaqeeya, siinta darawalada xirfad, iyo dhalidda ammaanka ah oo hufan dalka oo dhan. Ayan Musse waa tababaraha hawlgallada. Waxay ku dhalatay ee Bariga Afrika (Soomaaliya) oo ku soo koray ee Masar. In 1997, waxay Maraykanka yimid qaxootinimo. Ayan loo magacaabay guddiga Kaganacsiga Koraya Minnesota by Governor Mark Dayton, oo waa mid aad u lug bulsho-weyn Mankato. Kayse Obeyd waa darawalka hoose. Waxa uu ku dhashay ee East Africa (Soomaaliya) iyo Mareykanka u yimaadeen sidii soo galootiga ah 2000. Waxa uu u hawaystay in ay milkiilaha ganacsi tan iyo dhallinyarada waxa uu ahaa oo waxaa ka go'an inuu ka tago dhaxalgal ah carruurtiisa.
Xarunta Dhalashada River Valley, St. Peter
Gartay baahan yahay fursado dheeraad ah oo daryeelka caafimaadka hooyada ee miyiga Minnesota, Erika Urban ka qeyb galay shir lagu qabtay 2011 on bilaabo xarun dhalmada. Saddex sano ka dib iyada iyo Joe iibsaday iyo dayac tiray a home Victorian quruxda badan ee St. Peter, abuurista qaran aqoonsan gobolka iyo shati koras xarunta dhalashada. Erika u adeegtaa sida agaasimaha iyo mid ka mid ah umulisooyinkii, halka Joe maamula hantida iyo technology. Sida of March 2018, umulisooyinkii of RVBC ayaa ka qeyb galay wadar ahaan 226 dhalasho. Joe adeegi jiray afar sano oo ahayan la Navy Maraykanka, iyo Erika adeego lix sannadood la Ilaalada Qaranka ee Minnesota - waayo-aragnimo in xoojiyeen ay shaqada iyo rabitaan in ay u adeegaan bulshada.
K & G Jimicsigga, Mankato
Gabe Qormo & Katie Olson K & G Jimicsigga waa xaqiijinta riyo wadaagaan Qormo Gabe iyo Katie Olson, ka dib markii sano oo tababar ah, tartamaya iyo horumarinta talanti ay jimicsi si gaar ah. ganacsi Mankato ayaa la bilaabey 2011. Maanta waxa uu leeyahay 800-900 kids diiwaan kulan kasta oo marti kooxo badan oo ay ka mid yihiin / Dugsiga Sare ee Mankato East Loyola, Mankato School West High, kooxaha kooxda, Kooxaha tartanka iyo dhalinyarada. Its 32,000 sq. ft. xarunta waa weyn ee koonfurta Minnesota. K & G fiican at siinaya madadaalo ah, meel xiiso leh iyo ammaan u ah dhalinyarada deegaanka in ay sii joogaan taam.
(Under da'da 30)
Ben guulaystey & Tyler Wenner
Ben Wenner iyo Tyler Wenner aasaasay Ag Storm in 2010, oo manufactures qalabka beeraha diiradda saaray hal-abuurnimo iyo Misbaax alaabooyinka xalliyaan dhibaatooyinka caadiga ah beeraleyda. Waxaa oo dhan ku bilaabantay Hawk Rock ah™, nidaam lagdamaan dawdarka dhagax weyn tiga soo qaado dhagaxyada la cagaf halka beerta ku. Hawk Rock ayaa tan iyo markii la raacay Been badan oo kale oo ka samaysan baaxadda ay line alaabta mar walba sii koraya. Wenners ku sifaysay macaamiisha bartilmaameedka Ag Storm ayaa sida beeralay Weeraryahanka-fikirka iyo waxay saadaalinayaan in shirkadda ee "hal-abuurnimo noqon doontaa joogto ah, carqaladayn, iyo dagaal. "
WAAD KU MAHADSAN TO OUR 2018 qaabiyeyaasha!